तिरिरी मुरली बज्यो बनैमा लौ माया नमारे": गायक पन्नाकाजीको जीवनी र कार्य | nepal
We have 174 guests and 10 members online	Members : 53366
PoorBest Written by Narendraraj Prasai	Wednesday, 08 February 2017 19:27	View Comments
"तिरिरी मुरली बज्यो बनैमा लौ माया नमारेकसको यो सम्झना मेरो मनैमा लौ माया नमारे ।"(स्वर : पन्नाकाजी, सङ्कलन : सरोजकुमार शाक्य)Exclusive:2photos: काठमाडौँ- नेपाली सङ्गीतका शिखरमध्ये एउटा अर्का विशष्टि शिखर अथवा भनौं पन्नाकाजी शाक्य पनि अब हामीबाट विदा भए । २०७३ सालको माघ १२ गते एकाबिहानै यस धर्तीबाट उनको भौतिक चोला उठ्यो । पन्नाकाजी पुरानो पुस्ताका सङ्गीत श्रोताहरूको अत्यन्तै मन पर्ने नाउँ हो । उनी गीत गाएर नेपाली जनमानसमा खुबै चर्चित भए । वास्तवमा 'तिरिरी मुरली बज्यो बनैमा' नेपाली सङ्गीत पारखीको एउटा प्रिय गीत हुन गयो, एउटा प्रतिनिधि गीत पनि हुन गयो र एउटा चिरस्मरणीय गीत हुन गयो । त्यही गीतले पन्नाकाजीलाई धरहराको टुप्पो चढायो, सबैको मन पर्ने गरायो र गायनमा लोकप्रिय बनायो ।
Late singer Pannakaji Shakya. Photo courtesy: Nai Prakashan
संवत् १९८८ साल पुस १५ गते काठमाडौँको ओमबहालमा पन्नाकाजी जन्मेका थिए । चिसो दिनमा जन्मेका पन्नाकाजीबाट सधैँ तातो, न्यानो र मीठो सङ्गीतको आविष्कार भयो । उनी आफ्ना बाबुको सङ्गीतप्रतिको झुकावका साँचो लगानी मानिन्छन् । भजनगृहमा पन्नाकाजीका बाबु चतुरमान शाक्य हारमोनी बजाउँथे । बाबुको त्यही हारमोनीको रिड खेलाउँदा खेलाउँदै पन्नाकाजी सङ्गीतका कुशल खेलाडी नै बने । उनको खेल हेरेर आमा बालकुमारी छक्क पर्थिन् । वास्तवमा नानीदेखि लागेको बानीले पन्नाकाजी नेपाली सङ्गीतक्षेत्रका श्रद्धेय तारा बने । उनी काठमाडौँका नेवार हुन् तर उनी सारा नेपालीका साझा गायक बने ।
Late singer Pannakaji Shakya. Photo courtesy: Nai Prakashanपन्नाकाजीले २००४ सालमा सार्वजनिक रूपमा गीत गाउन थाले । सुरुमा उनले नेवारी गीत गाएका थिए र त्यसपछि उनले हिन्दी गीत पनि गाएका थिए । आफ्नै बाबुलाई गुरु थापेर उनी सङ्गीतमा निरन्तर समर्पित भएका थिए । पन्नाकाजीका बाबुको सुनचाँदीको दोकान थियो तर भजनकीर्तन भनेपछि उनका बाबु चतुरमान शाक्य मरिमेट्थे । वास्तवमा त्यही प्रभावले पन्नाकाजी सङ्गीतमा डुबेका थिए । आफ्ना बाबुको एक्लो छोरो भएकाले उनी सुरुदेखि नै आर्थिक रूपमा पनि सक्षम नै थिए ।सुरुसुरुमा पन्नाकाजीका गीतमा हर्रि्रसाद रिमालको साङ्गीतिक साथ जुट्थ्यो । रिमाल पन्नाकाजीलाई सङ्गीत मात्र सिकाउँदैनथे उनी नाटकमा अभिनय गर्न पनि सिकाउँथे । २००४ सालमा पन्नाकाजी १६ वर्षा थिए । त्यस बेला 'युवराज कुँडाल' नामक हिन्दी नाटक नेपालीमा अनुवाद भयो । त्यस नाटकमा पन्नाकाजीले अभिनय गरे र गीत पनि गाए । त्यसपछि मान्छेले भन्न थाले- "पन्नाकाजीले मीठो गीत गाउँदो रहेछ ।" उनी किशोर स्वर बोकेर क्रमशः धुरी चढ्न थाले, गीत गाएर मान्छेको मन जित्न थाले र आफ्नो कुशल योग्यता जनजनका मनस्थितिमा र्छन थाले :आँधीबीचको बिचरो चरीसरिछटपट पारी गयो कसले; कुन देश कसरी ?(स्वर : पन्नाकाजी , सङ्गीत : नातिकाजी, शब्द : म.वी.वि. शाह)पन्नाकाजीका गीत राजा महेन्द्रलाई पनि मन पर्थे । त्यसैले राजालाई गीत सुनाउन पन्नाकाजी राजदरबार जान थाले । राजदरबारमा उनले आफ्नो सक्कली कला प्रस्तुत गर्थे । त्यस बेला कवि राजाबाट हुकुम हुन्थ्यो "तिमीहरू गीत गाएर मात्र खान सक्छौ -" पन्नाकाजीहरू भन्थे- "सरकार ! हामीले सङ्गीतबाहेक अरू केही जानेनौँ ।" अनि राजाको महावाणी फुस्कन्थ्यो- "तिमीहरूको म व्यवस्था गर्छु" यस्तै छलफलका क्रममा राजा महेन्द्र स्वर्गीय भए । त्यो खबरले पन्नाकाजी रोए, सबै नेपाली रोए र देश नै आँसुको पोखरीमा डुब्यो ।त्यस समयमा नेपाली कलाकारहरू सारै उत्साही थिए । पन्नाकाजी पनि अत्यन्त उत्साही थिए । त्यही उत्साहमा उनी गायनमा निर्लिप्त डुब्न थाले । उनको स्वरसङ्गीतमा पारखीहरू झुम्म झुम्मिन थाले । वास्तवमा श्रोताहरू पन्नाकाजीको स्वर मीठो मानेर सुन्थे । उनको मिठासपूर्ण स्वरको चारै तिरबाट प्रशंसा हुन्थ्यो । उनका गीत फर्माइसमा बजिरहन्थे ।पन्नाकाजीको स्वरले काठमाडौँमा छ्याप्छ्याप्ती प्रेम गाँस्न थाल्यो । क्रमशः उनको मेलोडी बालकृष्ण समको कानमा पनि पुग्यो । त्यसपछि पन्नाकाजीलाई समले हर्रि्रसाद रिमालमार्फ रेडियो नेपालमा बोलाए । उनी २००८ सालको सुरुमै रेडियो नेपाल पुगे ।रेडियो नेपालको नेतृत्व बालकृष्ण समले गरेका थिए । त्यस बेला तारिणीप्रसाद कोइरालाचाहिँ निर्देशक थिए । पन्नाकाजी रेडियो पुगेका बेला जनार्दन सम कार्यक्रम प्रमुख थिए । जनार्दन समले पनि पन्नाकाजीलाई खुबै माया गरे, सहयोग गरे र कदर गरे ।पन्नाकाजी रेडियो पुगेपछि उनको स्वर बालकृष्ण समले दोहर्याई तेहर्याई सुन्थे । सम उनका स्वरमा झनै भुतुक्क हुन थाले । पन्नाकाजीको स्वरमा मुग्ध भएपछि समले भने- "म गीत लेख्छु; तिमी मेरो गीत गाऊ ।" पन्नाकाजीले समको रचना मीठो पाराले गाए । त्यसपछि पन्नाकाजी समका काँधमा पनि बोकिन थाले । अनि पन्नाकाजी झनै मक्ख परे । उनले झन् स्वर तिखारेर समकै गीतगाउन थाले :मनको अँध्यारो एउटा कुनामा यसलाई राखे कहिले नफालेफाल्नै परे पनि फाल्नुअगाडि फाल्छु भनेर किरिया नहाले ।(स्वर र सङ्गीत : पन्नाकाजी, शब्द : बालकृष्ण सम)पन्नाकाजीको स्वभाव, आनीबानी र विचारधारा अत्यन्तै सादा थियो । उनी जागिर, पद र धन बटुल्ने महत्त्वाकाङ् क्षामा कहिले लागेनन् । उनी खालि आफ्नो स्वर र सङ्गीतका कारणले ख्यात्रि्राप्त गायकमा स्थापित भए । 'तिरिरी मुरली बज्यो बनैमा' गीत गाएर उनी नेपालबाट भारत पुगे । बिस्तारै उनको स्वरले एसिया ढाक्यो र उनी स्वरबाटै युरोप, अफ्रिका र अमेरिकासम्म पुगे । अथवा भनौँ जहाँजहाँ नेपालीहरू थिए त्यहीँत्यहीँ पन्नाकाजीको स्वर भेटिन्थ्यो ।पन्नाकाजीले बाईस वर्ष टेक्तानटेक्तै ज्ञानदेवीसँग बिहे गरे । ज्ञानदेवीसँगको सुखद दाम्पत्य जीवनले पन्नाकाजीबाट सङ्गीतको आविष्कार मात्र भएन र स्वरले मात्र यिनी अघि बढेनन् यिनले आफ्नो साङ्गीतिक बिँडो समाउने लायक छोराहरू पनि पाए ।चार छोरा प्रितम, प्रवेश, पवित्र, प्रबिन र एक छोरी प्रेमामध्ये यिनका दुई भाइ छोरा प्रवेशमान र पवित्रमान चाहिँ गायक भएर निस्के । आफ्नो कलासाधनाको बाटोलाई आफ्ना सन्तानले समाउँदा यिनले आफ्नो जीवन र्सार्थक भएको ठाने । वास्तवमा प्रवेशमान र पवित्रमान युवापुस्ताका चर्चित र प्रिय गायक पनि भए ।रेडियो नेपालमा २०२२ सालमै पन्नाकाजीले उत्कृष्ट गायक भएर स्वर्ण पदक जिते । त्यसपछि उनी त्यहाँ वरिष्ठ गायकको दरबन्दीमा रहे । पन्नाकाजी गोरखा दक्षिणबाहुबाट पनि विभूषित भए । साथै उनी नइ प्रकाशनबाट नातिकाजी सम्मानले पनि सम्मानित भए । त्यो सम्मान उनले नातिकाजिकै हातबाट ग्रहण गरे ।२०४० सालमा पन्नाकाजीको शिरमा एकाएक हुन्डरी आयो, छातीमा बादल लाग्यो र पैतालामा काँडा रोपियो । त्यस बेला उनले रेडियो नेपालबाट जबर्जस्ती राजीनामा दिनुपरेको थियो । आफूले मलजल हालेको, गोडमेल गरेको र हरियाली पारेको रेडियो नेपालबाट उनले बाध्यतापूर्वक हात धोएका थिए । वास्तवमा उनले राजीनामा नदिउन्जेल रेडियो नेपालका निर्देशक प्रचण्डमानसिंह प्रधानले उनको कपाल खाइरहन्थे अनि उनीसँग करकर र कचकच गरिरहन्थे । पन्नाकाजीलाई निर्देशकले जति सताएका थिए त्यहाँबाट उनलाई त्यति नै अपमान पनि भिराइएको थियो । अथवा भनूँ पन्नाकाजीभन्दा कान्छो जागिरेलाई उनको हाकिम बनाएपछि उनको मन सारै दुःखेको थियो । यी विविध प्रपञ्चबाट चित्त दुखाएर उनले आफ्नो प्यारो ठाउँलाई आँखा चिम्लेर छाडेका थिए । त्यस दिन यिनका शिरमा चट्याङ परेको थियो ।२०४० सालसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पन्नाकाजीले ३०० वटा गीत गाए । साथै उनीद्वारा २०० जति गीतमा सङ्गीतको आविष्कार भयो । उनले केही भजन गाए, केही राष्ट्रिय गीत गाए र आधुनिक गीत चाहिँ धेरै गाए । उनी गीत गाएर नै नेपालका विभिन्न भूभागमा पुगे । जिन्दगीमा गीत गाएर बसेको क्षणलाई नै अमूल्य र महत्त्वपूर्ण मान्ने पन्नाकाजी स्वाभिमानले ओतप्रोत गायकमा चिनिए ।पन्नाकाजीका गीतमा प्रकृति, प्रेम, विरह, राष्ट्रप्रेम भेटिन्छ । वास्तवमा उनको मूल परिचय पनि उनको स्वर नै हो; जुन स्वर नेपाली जनमानसमा जीवन्त छ, अविस्मरणीय छ र बिर्सि नसक्नुको छ ःहामीलाई एक्लै छाडी दाइ त अब परदेश जाने भोआज मैले गाँसेको माला ढुङ्गामाथि ओइलेर जाने भो ।(स्वर : पन्नाकाजी, सङ्गीत : नातिकाजी, शब्द : माधव घिमिरे)-नरेन्द्रराज प्रसाईनइ प्रकाशनNai PrakashanKathmandu, Nepalत्रिमूर्ति निकेतन हेर्नुहोस्www.trimurtinepal.com.np